Dadaallada Gargaarka Mutual ka dib Hurricane Michael - Gargaarka Musiibada ee Mataanaha
Home/updates/Dadaallada Gargaarka Mutual ka dib Hurricane Michael
Habeenimadii Arbacada, Duufaanta Michael ayaa mareysay Florida panhandle, iyada oo ku soo dhacday dhul gariir sida Duufaanta 4-oo ah duufaankii ugu adkaa ee taariikhda duubtay si gobolka ugu dhufto. Duufaanta Michael ayaa ku burburtay Panama Beach, FL oo ay ka warbixisay 12-13 'duufaan-duufaan duqeynta ka dib iyo duminta guryaha gudaha Mexico Beach, FL. Florida, oo ah gobol caan ku ah dalxiiska sanadka-dhan iyo quruxda quruxda badan, ayaa goob joog u ahayd dhibaatada foosha xun ee masiibada dabiiciga ah ee ay sii xumaysay isbadalka cimilada iyo dabeecadda dabayaaqada.
Waxa loogu yeero Mareykanka iyo gumeysiyadiisa kaladuwan waxaa kuxiran isbedelka cimilada iyo musiibo aan dabiiciga ahayn labadii sano ee lasoo dhaafay. Irma, Maria, Florence — Michael waa kii ugu dambeeyay silsilado baaxad leh oo dhaawacyo ugaysteen dadka dabaqadda hoose shaqeeya markii ay kululaatay dabeyl kulul oo adduunka. Hay'ada IPCC ayaa dhawaan soo saartay warbixin si weyn looga dooday mustaqbalka meeraha oo ay u egtahay sii kordha.
Si kastaba ha noqotee, ka dib duufaantaas oo kale, bulshada Tallahassee waxay isu yimaadeen inay is taageeraan, is difaacaan, oo is-xoojiyaan.
Laga bilaabo subaxnimadii 9am subaxnimadii Khamiista, dadka waawayni waxay xidhiidh la leeyihiin Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha, Tallahassee DSA, Difaacayaasha Riyada, ka Ololaha xun ee dadka, Iyo Tallahassee PSL Waxay ku kulmeen magaalada taariikhiga ah ee Frenchtown kaliya dhagax ayaa laga tuuraa caasimadaha Florida. Shaqaalahayaga ayaa ka soo dhaqaaqay aagga, iyaga oo xaaqay jidad waaweyn, ka dibna waddooyinka dhinacyadooda, nadiifinta qashinka iyo qashinka. Markii aan sii wadnay, waxaan ka gudubnay biyo, ismaris, cunno fudud, waxaanna la sheekaysan jirnay dadyowga kala duwan ee nolosha.
Waxaan aragnay ficillo dhiirrigelin ah oo ka yimid iskaashi dhexmara deriskeenna, kuwaas oo qaar ka mid ah ay ku boodeen fursad ay ku siinayaan midnimadooda dadaallada nadiifinta.
"Maxaad halkan ugu faanaysaan?" Koox koox ah oo walaalo ah ayaa na weydiisay.
Waxaan kaliya isku dayeynaa inaan noqonno deris wanaagsan, ”mid ka mid ah saaxiibkiis ayaa ku jawaabay.
Saacadda soo socota, walaalo waxay naga caawiyeen nadiifinta jidadka kala duwan ee 3. Musiibooyinka waxay leeyihiin hab ah isu keena dadka, xayiraya kala-sooca sabab la'aanta ah ee gobolka ama caasimada iskudayaya inay na kala dhex dhigaan. Sida caqabadahaasi u burburaan, aadanaha ayaa sii kordha. Marka laga hadlayo aalad aan jeclayn oo kala saarta bulshooyinkayada, waxaan rajo ka heli karnaa dabeecadayada aan wadaagno. Iyada oo ay dowladdu sii waddo isku-filnaanta dhibaatooyinka iyo is-khilaafyada, ayaan xilligan la qabsan karnaa oo aan qaadan karnaa tallaabada aan ku ilaalin karno oo aan ku difaaci karno bulshooyinkayada. Midnimada, wadajirka, ma ahan sadaqadu waxay na siineysaa wado ka baxsan musiibada cimilada iyo xagga halganka aan dhamaadka lahayn ee lagu dhisaayo duni ka sii wanaagsan duqeymaha.
Kuwa ku sugan Tallahassee, Xarunta U doodista Dadka ee Florida Florida ee Tally waa meel aamin ah oo loogu talagalay dadka inay u yimaadaan gargaarka musiibada. The Xarunta u doodista Dadka ee Florida waa trans * loo dhan yahay oo soo dhaweynaya dadka aan sharciga lahayn.
Haddii aadan joogin aagga Tallahassee laakiin aad jeceshahay inaad tabarucdo, halkan ayaad ku samayn kartaa:
Liistada Rabitaanka ee Amazon ee Panhandle